Linux Semplice: Ngbanwe maka Crunchbang? | Site na Linux
M adịkarịghị nwere mmasị na minimalist nkesa, ma ọ bụ kama nke ahụ, na-abịa na ndabara na Njikwa Window ijikwa desktọọpụ.
Oge ahụ mgbe m ji OpenBox + agba gafere n'ime nchefu. Agbanyeghị, anaghị m akwụsị ịmata na ọtụtụ ndị ọrụ bụ ndị na - achịkwa ụdị nhazi a yana ihe atụ kachasị mma anyị nwere na Community nke Crunchbang (nke n'ikpeazụ ahụtụbeghị m ma ọ bụrụ na a kagburu ọrụ ahụ ma ọ bụ gaa n'ihu).
Isi okwu a bụ na mgbe m na-eme nchọgharị na netwọkụ mmekọrịta m na-agakarị, ahụrụ m ụfọdụ njide nke nkesa ọhụrụ nke akpọrọ aha Italiantali Semplice LinuxHa sị, na mmasi gburu nwamba ahụ. Dị nnọọ ịhụ na ọ "nyere anyị" ọzọ nkesa, m ebudatara ya, arụnyere ya, nwalee ya ma ugbu a, m na-ewetara gị ntakịrị nyocha 😀
1 Installwụnye Semplice Linux
2 Banye na Semplice
3 Kedu ihe anyị na-ahụ na Semplice?
Installwụnye Semplice Linux
Semplice Linux jiri isi Debian akwụghị ike (Ha dọrọ aka ná ntị), ma nwee nsụgharị maka ma 32 ma 64 ibe n'ibe. Enwere ike itinye ya na mkpanaka USB site na iji iwu dd
N'ezie, ha ga-agbanwe ụzọ ebe ISO dị na aha ngwaọrụ ebe ọ na-ekwu sdX
Mgbe anyị booted site na ebe nchekwa anyị nwere nhọrọ iji nweta LiveCD ma ọ bụ bido onye nrụnye ihe ozugbo, dị ka ọ dị m.
Anyi na achota uzo mbu: Anaghị m eji ụdị Debian ahụkarị. Ugbu a, anyị na-agbaso usoro nke ọkachamara nrụnye.
Anyị na-ahọrọ asụsụ anyị, nke a na-agaghị eji maka ntinye (nke ga-abụ Bekee mgbe niile), mana maka ogige anyị.
Ugbu a, anyị họrọ nhazi nke keyboard anyị. Mgbe m na-eji International English na ndị nwụrụ anwụ igodo, n'ihi na m kiiboodu bụ na English na otú a m nwere ike itinye Ñ na Nchikota AltDer + N.
Anyị na-ahọrọ mpaghara oge anyị.
Anyị na-ahazi aha njirimara anyị, paswọọdụ na aha ndị otu anyị. Anyị nwekwara ike ịgbalite akaụntụ mgbọrọgwụ, ebe ọ bụ na anyị ga-eji sudo na ndabara.
Ugbu a bụ akụkụ kachasị mgbagwoju anya nke nrụnye ọ bụla: Nkesa diski. N'okwu m, dịka ọ bụ igwe arụmọrụ, n'ihi na ahọpụtara m nhọrọ mbụ, nke mere na Semplice ga-ekewa oghere dị ka ọ chọrọ.
Ọ bụrụ n ’ị maghị etu esi kewaa draịvụ ike, ma ọ bụ na ịnweghị nkwado ndabere nke ozi gị, chọọ enyemaka ma ọ bụ mee ihe ọ bụla, bidoghachi kọmpụta ma nwee ọ happyụ
Na njedebe nkewa dị ka nke a:
Mgbe ahụ ọ jụrụ anyị ka anyị wụnye (ma ọ bụrụ na anyị chọrọ)
Nzọụkwụ ọzọ yiri nke anyị na-ahụ Antergos y bụ isi ihe nke abụọ. N'ikwu eziokwu, ọ bụ ihe masịrị m nke ukwuu, n'ihi na ọ na-enye onye ọrụ ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na anyị chọrọ anyị nwere ike ikwu nke a nzọụkwụ ebe ọ bụ na ozugbo arụnyere anyị nwere ike ẹkedori a Ọkachamara ọzọ.
Ugbu a, ọ bụ aka gị iji nyochaa na ihe niile anyị mere na mbụ dị ka ọ kwesịrị.
Ma ọ bụrụ na ihe niile dị mma mgbe ahụ anyị na-amalite ịwụnye ..
ruo mgbe m rụchaa 😀
Banye na Semplice
Anyị na-agbanyegharị kọmputa ahụ ma anyị na-ahụ njikwa oge site na LightDM.
Anyị na-etinye okwuntughe anyị ma anyị achọpụta isi nke atọ: Dị mfe Anyị na-amalite nnọkọ ahụ na onye na-enyere anyị aka kụziere anyị otu esi eji ya eme ihe. Naanị ihe ọ gwara anyị bụ: Iji bido, pịa ebe ọ bụla na desktọọpụ.
Ọmarịcha! Learned mụtara otu esi emeghe menu nke Semplice, ugbu a, pịnye ihe ọ bụla na keyboard:
na akpaghị aka anyị ga-enweta ụdị Launcher nke, dabere na ihe anyị dere, ga-egosi anyị nsonaazụ dị iche. Ekelekwa m gị! Nwere ike iji Semplice ..
Kedu ihe anyị na-ahụ na Semplice?
Ihe jọgburu onwe m (anya, ihe m kwuru maka m) ụdị nkesa na nhazi a, bụ na n'ikpeazụ anyị ga-anwụ na ngwa nke nnukwu Desktọpụ Environments. Ọ bụ ya mere na Semplice anyị na-achọta ngwa sitere na LXDE, GNOME, XFCE ma ọ bụ ihe ọ bụla bụ GTK.
N'ezie, ihe niile na-arụ ọrụ ọsịsọ, mana ọ na - amalite sistemu na 300MB, ya bụ, echela na site na iji Openbox na Tint2 dị ka otu panel anyị ga - ebido 60MB .. Oh, how I miss my 60MB starting with XFCE and Debian 😀
N'etiti ngwa anyị nwere dị ka ihe nchọgharị Iceweasel, Claws Mail dị ka a ozi ahịa na NSO dị ka ọnụ maka onye ọrụ. N'ihi na music playback ọ na-abịa na Pragha, nke m amaghi na igwu vidio dika GNOME Mplayer. Kpachara anya na wiil gị, n'ihi na ọ na-akpali anyị site na tebụl 4 ya.
N'aka nke ọzọ, Dị mfe gụnyere ngwá ọrụ iji hazie ogwe anyị nke ọma.
Ma dịka ị pụrụ ịhụ, n'agbanyeghị na ọ bụ nkesa dị mfe, ọ na-enye anyị ohere dị iche iche anyị na-enweghị ike ịchọta na ndị ọzọ ka ukwuu. Dị mfe Ọ bu n'obi ka ọ dị mfe ma dịkwa mfe iji ma echere m na ọ na-emezu ebumnuche ya nke ọma, gbakwunyere na ọ mara mma nke ukwuu na-amalite ya.
Abịa na Kernel 3.19, Systemd y Pulseaudio dị ka ihe nkesa na-ege ntị. Ọ gụnyere ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ike ọ gaghị aba uru nye ọtụtụ, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ karịa, anyị nwere ike ịdọta Synaptic ma wụnye ihe ọ bụla ọ na-ewe site na ebe nchekwa Debian.
A na-akpọ akara ngosi akara ngosi nke ndabara na ndabara Faba, a na-akpọ isiokwu GTK Zukitre-vera. Maka clipboard jiri ngwa a na-akpọ Clipit nke bu ezi Configrable m.
Mmetụta ọ nyere m, dị ka nke ahụ na n'ime nkeji ole na ole nke ule, bụ na ọ nwere ike ịbụ ụzọ magburu onwe ya maka kọmputa nwere obere akụ. You nwere ike ibudata ya na weebụsaịtị ha ma nwalee ya n'onwe gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Semplice Linux: Ndochi maka Crunchbang?
Crunchbang bụ nke debian kwụsiri ike, nke a bụ nke debian ejighị n'aka (ọbụnadị ule). Ọ bụghị ihe ọzọ, n'ihi na ọ nwere ike ịdaba (ma ga-akụ) mgbe imelite.
Daalụ maka ịkekọrịta! dị ọhụrụ na-adọrọ mmasị!
Afọ 65 dijo
Ubara oriri nke RAM yiri ihe a na-apụghị izere ezere. Na laptọọpụ dị afọ 11, Debian Wheezy + KDE, ụdị 32-bit, bụ naanị 170 Mb; na otu kọmputa na otu onye ọrụ nhọrọ, Sparky Linux (a na-ege ntị Debian Sid) + KDE, 32 ibe n'ibe nwekwara, 230 Mb.
Na njedebe m gbanwere KDE ka Ọ BATE, mana enweghị m ike ịda ya site na mbido mbụ 170 Mb. Ma ọ dịkarịa ala, emeela m nchekwa nke ihe dịka 60 Mb, nke maka kọmputa nwere 512 Mb nke RAM bụ ezigbo nchekwa.
Eleghị anya Semplice gosipụtara, ma ọ bụ ikekwe Siduction LXQt, na Siduction ahụ dị mma mgbe niile na ịhazigharị oriri nke RAM.
Maka oriri, m na-eji windo njikwa, ka ọ bụrụ ihe ziri ezi, icewm n'etiti 16 na 32 mbs nke oriri ee
Zaghachi na ceso
Ọ dị ka Antergos ... nke ahụ bụ enyo.
Na njedebe Crunchbang nwụrụ anwụ anwụ, mana ọgba aghara ndị ọzọ pụtara na-anwa ịtụte ya n'ụzọ nke ha, ụfọdụ na-aga alaka ụlọ ọrụ Jessie, ndị ọzọ na ndị Wheezy nọ. Ihe kacha mkpa dị mkpa bụ BunsenLabs 🙂
Banyere Semplice, ọ dị oke mma, ha nwere nnukwu echiche, echere m na iwebata na desktọọpụ na usoro ojiji bụ ihe onye ọhụụ batara ka ọ ghara ịla n'iyi na gburugburu ugbu a dịka Gnome ma ọ bụ Openbox, nke bụ ndị nwere ọdịiche kachasị dị na Windows interface.
Debian akwụghị ike? Ọ gafere…
Otu isi okwu: Semplice bụ nkesa GNU / Linux ewepụtara na 2010, dabere na Debian 'ejighị n'aka'. Ya mere, na ichekwa esemokwu dị iche iche na mmepe Debian ha dabere, ọ tọrọ Crunchbang. Ọ dị njọ na Semplice tụfuru otu akara ngosi Linux kacha mma n'ụzọ, penguuin ahụ nọ ọdụ ma gbaa ya gburugburu.
Iru eru. Ihe mbụ nke CB bụ CrunchBang Linux 8.10.01, dabere na Ubuntu na ụbọchị site na November 2008.
Ana m agbazi Funtoo (ya na OpenRC) + Openbox na-agba ọsọ na Compton, Tint2, Pulseaudio na-ejighị Consolekit (ochie na enweghị ndozi) na-eji 90 Mb nke Ram na mmalite.
M wee rapara na Debian Jessie, ya na XFCE, na-enweghi Consolekit na 300 MB nke buut RAM (dika ihe ntughari ị na-ekwu). Ọ bụghị imechu gị ihu, mana m na Debian RC nọrọ ma kwụsie ike ruo mgbe ụlọ ọrụ ahụ kwụsiri ike dịka ha mere Jessie.
Anọ m na-eji Debian ogologo oge na nso nso a, Debian na SystemD adịghị njọ ma ọlị, ihe bụ na anaghị m enwe mmasị etu esi ebu ụfọdụ ihe na SystemD, yabụ achọrọ m ịlaghachi na Funtoo, ma anaghị m na-eme mkpesa, ugbu a enwere m ule VM, gụnyere Debian Stable iji mee OpenCart na Magento ụfọdụ ule na agbanyeghị ihe niile m nwere na Funtoo, anaghị m eri ihe karịa 1,5 GB nke Ram n'otu oge belụsọ na ọ na-achịkọta Firefox na Cedgha
7.0.1 gbara gburugburu ruo ụbọchị ole na ole na-agbanwe ya ma e jiri ya tụnyere 7.0
Victor R. Onye dijo
Ọ dị mma maka ịdọ aka ná ntị Yoyo 😉
Zaghachi Victor R.
Ọfọn, m ga-eleba anya na distro a. Aga m etinye ya iji hụ ka ọ dị larịị ma dịkwa ncha.
Dịka ihe ọzọ na Crunchbang, echere m na ọ gaghị enwe ndị ọzọ dị ka ya hehe. Ọ bụ nke ọma ekiri na kachasị distro nke na-efe dị ka nku (ma ọ dị njọ).
(cmsv20) Cesar Silva dijo
Edemede mara mma, amaghi distro; agbanyeghị ọ dịka ọ dị m ka ọ na-eri nnukwu oke ma ọ bụ ọkụ. Gbalịa Lubuntu 13.10, echere m na ọ bụ ya nwere obere RAM, jiri 60MiB kwụnye sistemụ ahụ.
Zaghachi (cmsv20) Cesar Silva
Agbalịrịla m ya, ọ bụghị ihe ọjọọ, mana ndị njikwa windo a anaghị ekwenye m, ha dịkwa oke nfe, ma belụsọ ma inwere PC ochie, ọ ka mma ịchọ ihe zuru oke. Maka ịdị mfe M na-ahọrọ LXDE
Edgar okeke dijo
Agbalịrị m ya ma ọ masịrị m, belụsọ na enweghị m ike idezi menu ahụ, ebe menu anaghị arụ ọrụ yana compton anaghị amalite site na mbido .. Mana ka nke ahụ!
Zaghachi Edgar sierra
Ọfọn, ọ dị ezigbo mma distro otu ụbọchị m ga-agafe ya n'ihi na m nwere obere laptọọpụ nke ga-achọ distro dị ka nke ahụ nke ọma ... n'ụzọ maka ndị na-enweghị ike ichefu ochie crunchbang enwere ọrụ obodo nke na-agbali ịtụte ya a na-akpọ crunchbang ++ https://crunchbangplusplus.org/ nke dị na beta phase na ọ bụ ezie na ọ nwere naanị onyonyo maka bits 32, a na-atụ anya ụdị nke 64 n'oge na-adịghị anya
Ahụrụ m panel ahụ n'anya
Archbang ka nọ na oghere ma dị ezigbo ọkụ, mana ka anyị ghara ichefu na OS abụghị njedebe n'onwe ya, mana ọ bụ ụzọ, ọ baghị uru ịmalite na-erughị 100MB ma ọ bụrụ na anyị emechaa buo ịmepe taabụ 6 nchọgharị, gee ntị egwu ma jiri akwukwo.
GNU / Linux enyela ọtụtụ ndụ na kọmpụta na-esighi ike, mana a ga-emepe oghere, ugbu a, Systemd na Wayland ga-eme ka ndụ anyị dịrị na desktọọpụ karịa, mana ọ gaghị agbachi na ngwaike oriri.
Firefox Tweaks: wepu ụfọdụ ihe adịghị mkpa ma melite arụmọrụ